Federationtù Ndị Ọrụ Njem Na-eme Njikọ na-ekpughe Board ọhụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » Federationtù Ndị Ọrụ Njem Na-eme Njikọ na-ekpughe Board ọhụrụ
Akụkọ mkpakọrịta • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • India na -agbasa ozi ọma • News • ndị mmadụ • Tourism • Akụkọ dị iche iche
Sunil Kumar, Onye isi oche nke India United Federation of Association Agents Association
dere Anil Mathur - eTN India
Ndị otu United Federation of Travel Agents Association na India nwere ọgbakọ ọgbakọ kwa afọ (AGA) - Virtual, na June 28, 2021, nke hoputara onye isi oche ọhụrụ.
Maazị Sunil Kumar, onye isi oche TAAI gara aga, ka ahọpụtara ọzọ ka ọ bụrụ onye isi oche nke UFTAA na Mgbakọ General Annual.
UFTAA amalitela usoro mgbasawanye ya na-elekwasị anya n'ịkwado "Nrụgharị-Malitegharia-Nwepụta ọzọ Njem Njem & Njem Nleta."
Isiokwu mbụ nke UFTAA bụ ịbịaru ndị otu ya site na mmekorita ya na mkpakọrịta mba na ndị ọchịchị iji duzie oge mgbanwe a dị mkpa.
N'ime afọ 66 nke UFTAA, gọọmentị nke gbasaa karịa mba 65+ yana ndị otu karịrị ụlọ ọrụ njem 25,000, mkpakọrịta a gbalịsiri ike ịnọchite anya ndị otu njem njem, n'ụwa niile n'ihe metụtara IATA, ụgbọ elu, na agụmakwụkwọ. Site na njem nlegharị anya dị ka isiokwu kacha mkpa na Pọtụfoliyo ya, UFTAA lekwasịrị anya bụ inye aka wulite njikọ siri ike zuru ụwa ọnụ maka ndị nwere ụlọ ọrụ. Ọrụ UFTAA na -arụ ọrụ na IATA's Passenger Agency Programme Global Joint Council (PAPGJC) ga -aga n'ihu na -ekwupụta ihe ndị kacha mkpa n'ọma ahịa na -agbanwe ugbu a.
Mgbakọ UFTAA n'ozuzu wee kpebie ịdọrọ uche nke gọọmentị na "ịha nhatanha ọgwụ mgbochi" nke metụtara amụma edobere n'okporo ụzọ nke usoro njem Mmeghe nke usoro dị mgbagwoju anya site n'aka gọọmentị ole na ole, n'echiche nke UFTAA, nwere ike gbuo oge ntụgharị nke achọrọ. njem na njem ụlọ ọrụ na ọkwa siri ike gara aga. N'echiche UFTAA, mmekorita mba ofesi dị na mmepe ọgwụ mgbochi ga -egosipụtakwa na ịtọlite ​​ụkpụrụ mba ụwa maka ijikwa okporo ụzọ ndị njem n'etiti mba.
Kọmitii UFTAA ọhụrụ nwere:
Onye isi ala: Maazị Sunil Kumar Rumalla (TAAI) - India
Onye isi oche na onye isi oche Air & IATA: Maazị Yossef Fatael (IITOA) - Israel
Onye isi oche (ego): Maazị Trevor Rajaratnam (TAASL) - Sri Lanka
Onye osote onye isi ala (Njem nleta): Maazị Cetin Gurcun (TURSAB) - Turkey
Director: Mazi Mohammad Wanyoike (KATA) - Kenya
Onye nduzi: Nwada Varsha Ramchurn (MAITA) - Mauritius
Onye nduzi: Maazị Joe Olivier Borg– Malta
Director: Nwada Adriana Miori - Italy
Director: Mr William D'souza - Canada
Director: Maazị Richard Lohento - ATOV, Benin
Onye nduzi: Nwada Guizhen Sun - CATS, China
Onye na -akpọ Board: Maazị Achyut Gurgain - NATTA, Nepal
Bahamas Ministry of Tourism kpọrọ FINN Partners dị ka nke ọhụrụ ...